YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, June 29
G8 / G20 Human Rights Campaign for Burma
I'd like to mention my sincere appreciation regarding submission of your requests to G8 Chairman Canadian Prime Minister Harper to take lead to discuss Burma issue at G8 / G20 Summit.
I am very pleased to inform you that total 3,124 on line petitions (for Burma) were submitted to the Prime Minister of Canada through G20 Human Rights website (www.g20humanrights.com). In addition, I mailed similar signed petitions over 400 to the Prime Minister's office.
As requested by you, your families and friends requests, Burma issue was included in G8 Summit's agenda under the topic of "International Peace and Security" in day 2.
G8 leaders issued their demand to Burmese Regime at the end of the2days summit; mentioned it in G8 Muskoka Declaration as below:
"We urge the Government of Myanmar to take the steps necessary to allow for free and fair elections. Full and inclusive democratic participation is essential to this. We urge the Government to release without delay all political prisoners, including Aung San Suu Kyi, and engage the democratic opposition and representatives of ethnic groups inasubstantive dialogue on the way forward to national reconciliation."
Thank you very much for your continued support for the people of Burma.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/29/20100အကြံပြုခြင်း
29 June 2010 ဒိုင်ယာရီ
/29 June 2010 yeyintnge Diary.doc file here
29 June 2010 Yeyintnge Diary
တူမောင်ညို။ ဇွန်လ ၂၉၊ ၂၀၁၀
(နအဖ) စစ်အုပ်စု စပွန်ဆာလုပ်တဲ့ “နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း” ကတော့ တစ်စတစ်စ အသက်ဝင်လို့ လာနေပါပြီ။
မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့ ပါတီစုစုပေါင်းကလည်း (၃၃) ပါတီ ရှိလာနေပါပြီ။ ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ကြတဲ့ပါတီတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်ပါတီတွေကတော့ “တည်ထောင်ခွင့်” လည်းမကျ၊ “မှတ်ပုံတင်ခွင့်” လည်း မရသေးပါဘူး။ ဒီပုံအတိုင်းသာဆိုရင်တော့ (နအဖ) စစ်အုပ်စုရဲ့ “ပါတီစုံ” ဆိုတာ ကချင်ပါတီတွေ မပါဝင်ရတဲ့ ပါတီစုံလို့ ပြောရတော့မယ် ထင်တယ်။ ကယားပါတီ တည်ထောင်တယ်/ မှတ်ပုံတင်တယ်လို့လည်း မတွေ့မိ မကြားမိပါဘူး။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ကိုတော့ “NLD ပါတီဟောင်း” ဆိုပြီး မစ္စတာကပ်ကင်းဘဲ လာစဉ်က (နအဖ) ပြောခွင့်ရ အာဏာပိုင်က ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်မယ့်ဒီချုပ်ထဲက “အပဲ့” ကို NLD ပါတီသစ်လို့ ရည် ရွယ်ချင်ပုံပါပဲ။ ဝံသာနု NLD ပါတီ ဆိုတာလည်း မှတ်ပုံတင်ထားပြီးပါပြီ။
ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်တာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လ/ ဘယ်နေ့ရက်မှာ ကျင်းပမှာလဲ။ ဂျင်ဝဘ်က (၁၀/၁၀/၁၀) တဲ့။ (တစည) ကတော့ “အောက်- နို- ဒီ” တစ်လလမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ ခန့်မှန်းချေပဲ ပြောနိုင်ကြတယ်။ ဘယ်သူမှ နေ့ရက်အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိုင်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၁ သို့ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောနေတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်အတိအကျထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ရေးထက် ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကိုယ်တိုင် ဖြေရမယ့်မေးခွန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သက်တမ်းစေ့ရုံတင် မကဘူး၊ အိပ်စပိုင်ယားတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုင်ထားတဲ့ အာဏာနဲ့တပ်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒီအသက်ဒီအရွယ်မှာ “အများဗိုလ်လူပင်စင်ယူ” ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မယူဝံ့ပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လုပ်ချင်သူတွေက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနောက်မှာ တန်းစီနေပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ စစ်အုပ်စု ထိပ်သီးအာဏာပိုင်အသိုင်းအထဲက အဆုံးအဖြတ်အကျဆုံး ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
“နံပတ်ဝမ်း” ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲဘဲဖြစ်ရမယ် မဟုတ်လား။ ရှေ့က နံပတ်ဝမ်းက အိုမင်းလှပြီ။ နောက်မှာ နံပတ်ဝမ်း အလောင်း အလျာတွေ တန်းစီနေပြီ။ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကတော့ အမျိုးမျိုးကြားနေရတာပါပဲ။ ဘယ်သူဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ ဒီပွဲရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို ဘယ်သူမှ တိတိကျကျပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဖြေထွက်လာတော့မှသာ သြော် ဒီလိုကိုးလို့ မှတ်ချက်ချကြရမှာပါ။ ဒါကိုတော့ ငွေရောင်ပိတ် ကားပေါ်မှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖိုထားခဲ့ကြပါစို့။
အခုမှတ်ပုံတင်ပါတီတွေ လှုပ်ရှားလာနေကြတယ်။ လှုပ်ရှားလိုက်တော့ အသံတွေထွက်လာတယ်။ ထွက်လာတဲ့အသံအများစုက မတရားဘူး၊ မညီမျှဘူး၊ မမျှတဘူးဆိုတဲ့ အသံတွေပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့က အခုမှ စုကာစဖွဲ့ကာစ ပါတီတွေဆိုတော့ ငွေကြေး၊ စည်းရုံး ဖွဲ့စည်းရေး၊ သွားရေးလာရေးစတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်။ အများစုက အမတ်လောင်း (၁၀၀) ဝင်ရွေးနိုင်မယ့် အခြေအနေ မရှိကြဘူး။
သူတို့ ပထမဆုံးကြုံရတာ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း လူ (၁၀၀၀) သို့မဟုတ် (၅၀၀) ပြည့်မီအောင် စုဆောင်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုဆောင်းရေးခရီးစဉ်မှာပဲ (စရဖ)ထောက်လှမ်းရေး၊ (SB) ထောက်လှမ်းရေးတွေက မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေ သွားလေရာမှာ လူလုံးပြနေကြလို့ မထိပ်သာမလန့်သာဖြစ်ရတာတွေ၊ ရပ်ရွာပြည်သူများက စိုးရွံ့ထိပ်လန့်မှုတွေ ဖြစ်ရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုနေတာ ကြားနေရပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေကတချို့က “ကြံ့ဖွံ့ပါတီ” ကို ပြိုင်ဘက်လို့ သဘောထားကြောင်း ပြောသံလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုနေကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီဘက်က ပြန်ပြောသံ မကြားရသေးပါဘူး။ မတူလို့/ မမှုလောက်လို့ ပြန်မပြောတာ လားတော့ မသိပါဘူး။ စစ်အုပ်စု အမေတူအဖေကွဲ (တစည) အကိုကြီးက ကြံ့ဖွံ့ညီလေးကို ပြိုင်ဘက်လို သဘောထားတယ် လို့ပြောသံလည်း ကြားရပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ညီလေး ပါတီဖွဲ့တာက (မဆလ) ကနေ (တစည) အဖြစ် ဘဝပြောင်းတာထက် ပိုပြီးဗြောင်ကျတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ညီလေးက မှတ်ပုံတင်ပါတီအားလုံးထက် ခေါင်းရော၊ ခြေရော၊ လက်ရော ကဲတဲ့သာတဲ့ အရှင်မွေးနေ့ချင်းကြီး လူလွန်မသား ညီလေးဖြစ်တယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့အမွေခံခြေပြုပါတီဖြစ်တယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွက် လူ(၁၀၀၀) ရဖို့ဆိုတာ ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာရတာကမှ ခက်နေပါလိမ့်ဦးမယ်။
ကြံ့ဖွံ့က သူ့အဖွဲ့ဝင်အင်အား ၂၄ သန်း ကျော်ရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြောဖူးတယ်။ ဒီပမာဏက တိုင်းပြည်လူဦးရေစုစုပေါင်း (၅၄ သန်းကျော်)ရဲ့ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တောင်သူလယ်သမားတွေထဲမှာ ၃၅ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျောင်းသားလူငယ်ထဲမှာ ၂၉ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလုပ်သမားထဲမှာ ၂၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိတယ်လို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ကြံ့ဖွံ့က လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ဌာနချုပ်တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်သိန်းသိန်းကျော်က ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီစာရင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် ကျော်က စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေထဲက ကြံ့ဖွံ့အင်အားတွေ မပါသေးဘူး။ အဆောက်အဦး၊ ငွေကြေး၊ စည်းရုံးဖွဲ့စည်းမှုစတာတွေ မပါသေးဘူး။
ဒီလောက်အထိ ကိုးကားပြရတာက ဒီကနေ့ မှတ်ပုံတင်ကြတဲ့ပါတီတွေနဲ့ (နအဖ) စစ်အုပ်စုတိုက်ရိုက်အခြေပြု အမွေခံကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနေအထားဟာ မိုးနဲ့မြေလို ကွာလှတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်း စစ်အုပ်စု စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေစည်းဝိုင်းထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရမှာ မဟုတ်လား။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေဆိုတာတွေကလည်း (နအဖ) စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပြဌာန်းပေးထားတာတွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒီလိုမတရားတဲ့ တစ်ဘက်သတ်ကျလွန်းလှတဲ့ အခြေအနေ အချက်အလက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေအနိုင်ရဖို့ဆိုတာ ဝေးလွန်းလှပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ပါတီတစ်ခုက ပြောနေသလို “လူထုတိုက်ပွဲပုံစံနဲ့ ဖြတ်သန်းရမယ်” ဆိုတာလောက်နဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။
ဒါ့အပြင်မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေရဲ့ “သက်နေ” နဲ့ ကံကြမ္မာဟာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့ သိန်းစိုးကော်မရှင်ရဲ့ လက်ဝယ်မှာရှိနေတဲ့ အချက်ပါဘဲ။
မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေရဲ့ “ဖြစ်- တည်- ပျက်” ကို သိန်းစိုးကော်မရှင်က ပြုပြင်စီရင်ဖန်တီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်က “ဖြစ်” ဆိုရင် “ဖြစ်” ရမယ်။ “တည်” ဆိုရင် “တည်” ရမယ်။ “ပျက်” ဆိုရင် “ပျက်” ရလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူတွေက ငြင်းပယ်လွန်ဆန်ဝံ့မှာလဲ။ “ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်ရမည်” (Final & Conclusive) အာဏာကုန် ပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တန်တိတ်။ ဘယ်သူအတန့်တက်ဝံ့သလဲ။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာတွေ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့၊ တစ်ဖက်သတ်ကျတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေက ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်တာ၊ မီဒီယာတွေမှာ ပြောဆိုတာတွေကြားနေရပေမယ့် သိန်းစိုးကော်မရှင်က ဘာမျှ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိပါဘူး။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မစခင်ကပဲ မညီမျှမှုတွေ၊ မတရားမှုတွေ၊ အနိုင်ထက်ကျင့်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတာ ထင်မြင်ယူဆချက်သက်သက်၊ သံသယသက်သက်မျှ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေရဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်နေပါပြီ။
မှတ်ပုံတင်ပါတီတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ လေထဲမှာပဲ လွင့်ပျယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၅ ရပ် ပြင်ဆင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို သမာသမတ်ရှိသူများဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ခွန်ထွန်းဦး၊ စိုင်းညွန့်လွင်၊ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးလွှတ်ပေးရေးဆိုတဲ့ အဆင့်က စတင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခြေခံတွေ အချက်အလက်တွေ မရှိဘဲ။ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို မျှော်လင့်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ငွေကုန်လူပမ်းပြီး ပြည်သူမျက်မုန်းကျိုးတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် (နအဖ) စစ်အုပ်စု စပွန်ဆာအတိုင်းသာ တစ်သဝေမတိမ်း ဆက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီပဲ အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ လွှတ်တော်ဆိုတာလည်း အရပ်ဝတ်လဲထားတဲ့ စစ်သားနဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ စကားပြောဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နေရာအချို့မှာ အရွေးချယ်ခံရမယ့် မှတ်ပုံတင်ပါတီများက လွှတ်တော်အမတ်များအဖို့ကတော့ နတ်ကရာ ကြည့်မောနေရမယ့်ကိန်းပဲ ဆိုက်ပါလိမ့်မယ်။
(နအဖ) စစ်အုပ်စု စပွန်ဆာအောက်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးတော့လုပ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရမှာ စစ်အုပ်စု စိတ်တိုင်းကျဆွဲပေးထားတဲ့ စည်းဝိုင်းထဲက နိုင်ငံရေးသာလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီစည်းဝိုင်းထဲမှာ တဝဲလည်လည်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ အရပ်ဝတ်လဲထားတဲ့စစ်သားနဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ စစ်သားအပြန် အလှန်စကားများတာကို ထိုင်နားထောင်နေရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် (နအဖ) စစ်အုပ်စုစိတ်တိုင်းကြ ရေးဆွဲထားတဲ့ စည်းဝိုင်းကိုဖောက်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်။ (နအဖ) စစ်အုပ်စုရေးဆွဲထားတဲ့ စည်းဝိုင်းထဲ ပိုမိုကျယ်ဝန်းတဲ့၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုပိုမိုရှိပြီး၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု အားလုံးပါဝင်နိုင်မယ့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် စည်းဝိုင်းသစ်ကို ရေးဆွဲဖန်တီးရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းကသာလျှင် ယနေ့ကာလအတွက် အဓိကကျတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ပြောရရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ တိုက်ဖျက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်မှာ တချို့က နိုင်ငံရေးဆိုတာ “မစားကောင်းတဲ့အသီး” ၊ “ဘဝပျက်သွားမယ်” ဆိုပြီး ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ကြောက်အား ပိုရုံတင်မကဘူး၊ အခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားလိုသူတွေကိုပါ တဖက်လှည့်နဲ့ တားမြစ်ချောက်လှန့်တတ်ကြပါသေးတယ်။ (နအဖ) စစ်အုပ်စု စပွန်ဆာလုပ်ပေးတဲ့ စည်းဝိုင်းထဲကနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းနိုင်မယ်လို့ ဘယ်သူပြောဝံ့သလဲ။
နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ချောင်းသာကမ်းခြေ သဲသောင်မြေပေါ်မှာ အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်တာမှ မဟုတ်တာ။
အနိုင်ရတဲ့ဟာကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီး နောက်တခါ ထပ်လုပ်တယ်။
NLD ရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင် ရပ်တည်ချက် သြစတြေးလျ မေးမြန်း
နော်ရှိုး အင်္ဂါ, 29 ဇွန် 2010
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၆ ရက်နေ့ကစလို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုတော့ပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကို ချဉ်းကပ် တွေ့ဆုံနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကလည်း ဩစတြေးလျ အစိုးရ အရာရှိတချို့ဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ NLD ရဲ့ သဘောထားနဲ့အတူ ရှေ့ဆက် ရပ်တည်ချက် ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုအကြောင်း သိရအောင် NLD ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတဲ့ နော်ရှိုးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မနေ့ တနင်္လာနေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး၊ ဒု-သံအမတ်ကြီးနဲ့အတူ ဩစတြေးလျ အစိုးရရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့နဲ့ ဦးတင်ဦးရဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ ၁ နာရီကျော်လောက် ကြာတဲ့ ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ဩစတြေးလျဘက်က အဓိကထား ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာကတော့ NLD ရဲ့ ရှေ့ဆက် ရပ်တည်ချက်နဲ့ စစ်အစိုးရ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထား ဖြစ်တယ်လို့ NLD ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို အခုလို ပြောပါတယ်။
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း။
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း။ အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၀၉။
“အထူးသဖြင့်တော့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရပ်တည်မှု၊ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရှေ့ဆက် ခရီးရယ်၊ နောက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အပေါ်မှာ သဘောထားရယ်၊ ဒါတွေကို ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။”
အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေကို အန်ကယ်တို့ဘက်က ဘယ်လို ဖြေကြားခဲ့ပါသလဲ။
“အန်ကယ် ဦးတင်ဦး ဖြေပါတယ်။ အဓိကကတော့ အခု အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ NLD က ဥပဒေအရ မေလ ၆ ရက်နေ့က စပြီးတော့ ဥပဒေသဘော အရတော့ မရှိတော့ဘူး။ သို့သော် NLD အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ကတော့ ဥပဒေအရ ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ ဒီလို ခံယူချက်နဲ့ အညီလည်း ကျနော်တို့ ရပ်တည် ဆောင်ရွက်တယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကို ရပ်စဲတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေက မှန်ကန်မှု မရှိဘူး။ နောက် Sanction နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ Sanction ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ကျနော်တို့ ဒီအပေါ်မှာတော့ ဘာမှ သိပ်ပြောစရာ မရှိဘူး။ အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD အနေနဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိတယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါသလဲ။
“ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ကျနော်တို့ ပြောပြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ပါတီများ ကိစ္စကိုလည်း မေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ပြောပါတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒါ သူတို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ သူတို့ ဆောင်ရွက်တာ၊ သူတို့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ လောလောဆယ် မှတ်ချက်ပေးစရာ မရှိသေးဘူးဆိုတာ ပြောလိုက်ပါတယ်။”
ဆိုတော့ အခု NLD အနေနဲ့ပေါ့လေ၊ စစ်အစိုးရဘက်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ အနေနဲ့ အသိအမှတ် မပြုထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ အန်ကယ်တို့ဘက်ကတော့ ဒါဟာ မတရားဘူးလို့တော့ ပြောထားတယ်။ အခုလိုမျိုး NLD ရဲ့ အခြေအနေမှာ နိုင်ငံခြားကနေပြီး သံတမန်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို လာရောက်တွေ့ဆုံတာမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ အန်ကယ်တို့ဘက်က အဲဒီလိုမျိုး အန်ကယ်တို့ကို လာရောက် ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံတဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
“ကျနော်တို့ သဘောထားကတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေက နိုင်ငံတကာက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်နဲ့ မတူဘူး၊ အဲဒါကြောင့် သူတို့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိတယ်လို့ အန်ကယ်တို့ နားလည်တယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ တခါလုပ်တယ်၊ အနိုင်ရတဲ့ဟာကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီး နောက်တခါ ထပ်လုပ်တယ်။ နောက်တခါ ထပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း စည်းကမ်းတွေ အလွန်တင်းကျပ်စွာနဲ့ လုပ်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာ အတော် တွေ့ရခဲတဲ့ အခြေအနေလို့ နိုင်ငံခြားက ယူဆတယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ လာရောက်ပြီး မေးမြန်း စုံစမ်းနေတယ်လို့ပဲ ကျနော် မှတ်ယူပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲက ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာဘက်က တကယ်ပဲ ထိထိမိမိ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အန်ကယ်တို့ဘက်က ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိပါသလဲ။
“နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံ အရေးကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သုံးဖို့ သိပ်မသင့်တော်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ နိုင်ငံတကာက သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို သူတို့ ထုတ်ဖော်မယ်၊ သူတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေ ဆောင်ရွက်မယ်။ အရေးယူ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ Take Action ဆိုတာမျိုးက ဒီလိုဆောင်ရွက်လို့ မရဘူး။ ကုလသမဂ္ဂကသာ ဆောင်ရွက်ရမယ်။
“အဲတော့ ကျနော်တို့ ဘာမျှော်မှန်းလဲ၊ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုတာလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီက အမြင့်ဆုံး၊ အမြင့်ဆုံးမှာကို ဗီတိုအမြဲတမ်း သုံးနေတဲ့ မိတ်ဆွေကြီးများ နှစ်နိုင်ငံက ရှိတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ အားလုံးကို ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲ ကြားထဲကပဲ ကျနော်တို့ ရပ်တည် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
အန်ကယ်တို့ဆီမှာ လာတွေ့တဲ့အထဲမှာ အနောက်နိုင်ငံဘက်က ခေါင်းဆောင်တွေက ပိုများတယ်ဆိုတော့ ကျမတို့ အိမ်နီးနားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရှေ့အာရှမှာ အင်အားကြီးတဲ့ တရုတ်တို့လို နိုင်ငံတွေက အရာရှိတွေ လာချဉ်းကပ်တာမျိုးရော ရှိပါသလား။
“ကျနော်တို့ ဒီလို ခွဲကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်လည်း ထွန်းကားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက လာတာ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ တချို့ ပြောပေမဲ့ မထွန်းကားသေးတဲ့ နေရာက လူတွေက သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူးဗျ။”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပြီးနောက် သြစတြေးလျ အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ထိပ်တန်း အရာရှိတွေကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသလို မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ထားတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒလမြို့နယ်အတွင်း တချို့နေရာ တချို့လူတွေအတွက် မိုးရွာရင် အစို နေပူရင်အခြောက် ဆိုသလို မိုးမလုံ လေမလုံ အမိုးအကာမရှိတဲ့ နေရာမှာ နေထိုင် စားသောက်လို့ အသက်ရှင်သန်ဖို့အရေး ကြိုးစားရုန်းကန်နေရဆဲပါ ပညာမသင်နိုင်လို့ စာမတက်…စာမဖတ်နိုင်တော့ ဗဟုသုတနည်း…ဗဟုသုတနည်းတော့ ……ဆင်ခြင်ဥာဏ်မွဲ……….၀င်ငွေနည်း………...ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြု……………..ကလေးတွေကများ….…………….ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဆင်းရဲသံသရာထဲ ၀ဲနေကြရပါတော့တယ်…….ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တက်စွမ်းသ၍ ကူညီဖေးမလို့ လူမပီသတဲ့ သူတို့ရဲ့ လူ့ဘ၀တွေကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းအားဖြင့် မြှင့်တင်ပေးကြပါစို့လားဗျာ…………….
၃။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ သင်ကြားပေးခြင်း…စသည်တို့ လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်…
ဖုန်း - ၂၆၉၅၅၆ (ရုံး)
Toronto G-20 Protest Videos (final)
Operation Anthropoit I
Let_s MakeaNew Game_ June 27_ 2010
ကျွန်တော်ထင်သည်။ မဲမပေးရေး သပိတ်မှောက်ကြဆိုသော စကားကို လူတိုင်းမပြောကြသေး။ ပြည်နယ်တိုင်း မပြောကြသေး။ မြိုနယ်တိုင်း မပြောကြသေး။ ထို့ကြောင့် သတိရမိသည်ကို ဖေါက်သည်ချချင်သော စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ထောက်ခံပွဲလုပ်တုံးက ပြည်ပမှာ NO ကမ်းပိမ်းကို လုပ်ခိုင်းတော့သည်။ အိန္ဒိယဘက်က ကျွန်တော်တို့က သပိမှောက်ကမ်းပိမ်းကို လုပ်သည်။ မမှီလိုက်တော့ပါ။ အရှေ့ဘက်က ညာဏ်ကြီးရှင် အဖွဲ့များမှ NO ကမ်ပိမ်းသမားများ၏ အသံကို ပြည်သူတို့ကြားသွားကြပါသည်။ နောက်ဆုံးမှာ NLD ကလည်းကြားသွားပါသည်။ အိန္နိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီရှိ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံ အင်အားစုများတွင်မူ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ကြပါသည်။ အရှေ့ဘက်ကပြောသမျှကို လိုက်လုပ်သော အနောက်ဘက်က ခါတော်မှီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ကြံမစုတ်ရမှာကို စိုးရိမ်ပြီး လိုက်လုပ်ကြရပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် စကားရည်ပွဲလုပ်ပြီး NO လား သပိတ်လား ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပ ကြပါသည်။ ယင်းစကားရည်လုပွဲတွင် ကျွန်တော့်ကို မည်သူမျှ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါ ။ သို့သော် ကံခေနည်းသူ မောင်ရှင်ဖြစ်သော ကျွန်တော့်မှာ အဖွဲ့အတွင်းပါသော အပေါင်းမကောင်း၍ စကားရည်လုပွဲပြုလုပ်သူ ဒိုင်လူကြီးများကသပိတ်မှောက်မည့် အဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို အရှုံးပေးလိုက်ရပါသည်။ သို့သော် လူချင်းရင်းနှီးသော ဒိုင်လူကြီးများသည် ကျွန်တော်တို့၏ စကားရည်လုပွဲတွင် ပြောဆိုချက်များကို အထူကောင်းမွန်သော်လည်း အရှုံးပေးလိုက်ရပါကြောင်း နုတ်မှ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံသွားရှာကြပါသည်။ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော ကျွန်တ်ာတို့၏ စကားရည်လုပွဲအကြောင်းကို ယနေ့ထိ မမေ့နိုင်သည်မှာ ခွဲခွါခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို သတိရ၍ပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် မိမိတို့အလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တွင် မိဇံရပ်ကွက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရွေးကောက်ပွဲကို တယောက်မကျန် သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်ကာ မဲတပြားမျှ မပေးကြပါ။ ယင်းမှာကျွန်တော်တို့၏ လှုပ်ရှားမူ အောင်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းပြပါမည်။ မြို့တမြို့လုံးကို ပြောပြနိုင်စွမ်း မရှိသော်လည်း ကြားသောရပ်ကွက်မှ သပ်ိတ်မှောက်ကြပါပြီ။ ထို့ကြောင့် စစ်တွေမြို့ မှ မိဇံရပ်ကွက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတွင် မဲမပေးသော ကန့်ကွက်သော သပ်ိတ်မှောက်သော ရပ်ကွက်တခုဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါပြီ။ နအဖစစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သလို ကျွံန်တော်တို့၏ နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်လည်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါပြီ။ သို့အတူ အခြားသော နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရှိ မြို့ရွာရပ်ကွက် အသီးသီးများကိုလည်း ယခုအချိန်တွင် မိဖံရပ်ကွက်ကဲ့သို့ ဖြစ်စေချင်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမပေးလျှင် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ မိမိတို့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာကြမည် ဆိုပြီး ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းစာဂျာနယ်များတွင် သတင်းစာဆရာများက ရေးသားနေကြပါသည်။ ဖတ်ရသူများမှာ တဖက်သောအသိများကို ရရှိနေကြပါသည်။ ပြည်သူတို့မှာ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ သတင်းစာဂျာနယ်များတွင် ပါရှိသော သတင်းများကို ဖတ်ရှူနေရပါသည်။ အတိုက်အခံများ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ တုန့်ပြန်ပြောဆိုချက်များကို သေသေချာချာ မဖတ်ကြရ။ တနည်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲကို နွားဖြစ်ဖြစ် ခွေးဖြစ်ဖြစ် အမဲရိုးဘဲကိုက်ရ ကိုက်ရ ၀င်ပါမည်ဟု ပြောဆိုသော ဦးသုဝေ၊ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းနု ။ ဦးအေးလွင်တို့တောင်မှ မည်သို့မျှ ရေးသားပြောဆိုနိုင်စွမ်း မရှိဖြစ်နေပါသည်။
အခြားတဖက်မှာ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံရေးစစ်မက်ဖြစ်နေပါသည်။ ယင်းစစ်ပွဲတွင် အလူးအလှဲ ခံနေရသည်မှာ စစ်အစိုးရမဟုတ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ။ ဥရောပသမဂ္ဂ ၊ အာဆီယံတို့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါပြီ ။ ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်နေပါသည်။ ပြည်ပရှီကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံတို့နှင့်လည်း ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်နေပါပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံမတင်သောနေ့ကစ၍ အမေရိကန်အစိုးရနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများ အဖွဲ့အစည်းများတို့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံနေပါသည်။ မှတ်ပုံမတင်ကြောင်းကို သိပါလျှက်ကယ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကို သွားရောက်မေးနေသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာ နေပါသည်။ ဘာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်သနည်း ဆိုသောအချက်ကို ကောက်ချက်ချနေကြသည်မှာ မည်မျှအထိ မှားနေသည်ကို နိုင်ငံတကာအစိုးရ ၊ကုလသမဂ္ဂ နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့သည် လုံးဝမှားယွင်းနေပါသည်။
ဤရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မပါဝင်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ မှတ်ပုံမတင်ခြင်းဟု ဆိုလျင် မပြည့်စုံ။ ယင်းမှာ ယေဘူယျအချက်အလက်တခုသာဖြစ်ပါသည်။ အဓိကမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေး ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်သော စစ်အစိုးရကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ သော်၎င်း။ အမေရိကန်အစိုးရမှသော်၎င်း လွှတ်ပေးနေသည်မှာ တစက်မျ ကြည့်မကောင်း။ ယင်းထက်ပိုဆိုးသည်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပါတီပေါင်းစုံ ပါဝင်ရေးကို တောင်းဆိုနေပေးပါသေးသည်။ ဤသည်မှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါသည် ။ စစ်အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲကို တကြိမ်လုပ်၍ ပြီးခဲ့ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲတခုသည် ဒီမိုကရေစီကာလတခုကို ဖြတ်သန်းရန်အချက်အလက် တခုဟု ပြောဆိုနေသော သူတို့မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အဖက်လုပ်၍ မပြောကြ.
စင်စစ် ကျွန်တော်တို့က စစ်အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲကို တကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါပြီ။ ယင်းအချိန်ကလည်း အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးခဲ့။ ယခုလည်း တကြိမ်လုပ်တော့မည်။ ခုကော အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု မည်သူက ဂတိခံဝံ့ပါသနည်း။ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု စစ်အစိုးရက ပြောသည်ဆိုလျှင် ကြည့်ပြီးစဉ်းစားရန်လိုသည်။ တနေ့က လာအိုနိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးချုပ် နေပြည်တော်ကို ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ် နှစ်ခုသာရှိသော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည့် လာအိုနိုင်ငံသည် စစ်အစိုးရအတွက် ကစားစရာရုပ်သေးတခုအဖြစ် ခံသွားရပါသည်။ လာအိုဝန်ကြီးချုပ်သည် နေပြည်တော်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက စစ်ရေးအခမ်းအနားဖြင့် ကြိုဆိုခြင်းထက် တိုက်ပုံဝတ်ဝန်ကြီးချုပ်များကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့မြင်သွားရပါသည်။ ကြိုးကြီးချိတ်များဖြင့် ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနှင့် မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတွင်မှ ၀တ်ဆင်ကြရသော မန္တလေးအချိတ်လုံချီ နှင့် တိုက်ပုံတို့မှာ စစ်ရေးပြအခန်းအနားဖြင့် လူတဦးကို ၀တ်ပြီးကြိုဆိုသည်မှာ ကြည့်၍မကောင်းလှပါ။
အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရက အမြတ်ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရပ်သားဝန်ကြီးများသည် မကြာခင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှသ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့မှာ စစ်အစိုးရ၏ နောက်ထပ်တက်လာမည့် အစိုးရ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀န်ကြီးတနေရာလောက် စဉ်းစားနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ၀န်ကြီးနေရာမရရှိနိုင်တော့။ ဤအချက်ကို စဉ်းစားနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တနိုင်ငံလုံးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသော ဦးသုဝေ၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဦးအေးလွင်။ ဦးနေမျိုးဝေတို့မှာ မည်သည့်နှင့်မျှ ၀န်ကြီးတနေရာစာ မရရှိနိုင်ကြောင်း လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ကြိုဆိုပွဲကို ကြည့်က သိသာခံစားနိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် လွှတ်တော်အတွင်းမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ တစညများ ၊ကြံ့ဖွဲ့များနှင့် နေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကော အမျိုးသားလွှတ်တော်ကော ဆွေးနွေးမည်ဆိုထားသည်ကိုကြည့်၍ ယင်းလွှတ်တော်၌ မည်သည့်အတန်းအစား ရှိမည်နည်းကိုလည်း တွက်ဆနိုင်ပါပြီ။
ပြီေးတာ့ မိမိတို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လို့ကော ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပါမည်လား ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရန်လိုနေသည်။ မနေ့တနေ့က ပြည်သူတွေကို ရစရာမရှိအောင် ဝေဖန်လိုက်ကြသည်မှာ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဦးနေမျိုးဝေ တို့ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွမူမရှိ၊ အားလုံးကို ကြောက်နေကြသည်။ တက်ကြွမရှိဟု သူတို့တွေ၏ ပြောသောစကားတွေကို ပြည်သူတွေ ကြားကြရပါပြီ။ ပြည်သူတွေဆီက အသဲကြားမှ မဲတပြားလိုချင်၍ တောင်းခံနေသော သူတို့မှာ ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်တွေ တက်ကြွမူ မရှိဆိုပြီး ပြောဆိုနေပါပြီ။ ယင်းမှာ ပြည်သူတွေကို စော်ကားလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူတွေ နလပိန်းတုံးမဟုတ်ကြောင်းကို ပြည်သူတွေက ပြောဆိုကြရပါတော့မည်။ ကျွန်တော်တို့ အတိုက်အခံသမားတွေက ချပြဖို့လိုပါပြီ။ စင်စစ် ပြည်သူတွေသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လိုလားတောင့်တ ကြပါသည်။ မျှော်လင့်နေကြပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အာဏာရယူစေချင်ပါသည်။ အကယ်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသာ ပြည်သူတွေရှေ့မှာ အသဲကြားမှ မဲတပြားကို တောင်းခံလိုက်လျင် သူတို့နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့သော ပြည်သူတွေသည် ငြိမ်၍နေကြမည့်သူများ မဟုတ်ဟုထင်သည်။ တက်ကြွကြမည်မှာ သေချာပါသည်။ အားရပါးရလက်ခုပ်လက်ဝါး တီးပေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ထောက်ခံအားပေးကြသည်မှာ နိုင်ငံရေးနိုးကြးမူကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တက်ကြွမူကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မကြောက်သောစိတ်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူတွေသည် ခေါင်းဆောင်ကို လိုက်ရှာနေပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ပြည်သူတရပ်လုံး၏ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စကားကို လိုက်နာလက်ခံ ကြပါသည်။ ယခုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဲမပေးရေးကို ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ ရွေေးကာက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သော အခွင့် အရေး ရှိသလို မဲမပေး၍လည်း ရသော အခွင့်အရေးလည်း ရှိပါသည်။ ယခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲတွင် မပါဝင်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မဲမပေးပါနှင့်ဟု ပြည်သူတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါပြီ။ သည်လိုဆိုလျှင် ပြည်သူတွေ မည်သို့လုပ်ကြပါမည်နည်း ။ အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကကော မည်သို့ လှုပ်ရှားပြောဆိုကြပါမည်နည်း။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ကြံ့ဖွံ့အစည်းအဝေးတွင် မဲအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိရေးအတွက် ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောဆိုပါပြီ။ နိုင်အောင်လည်း အကွက်ချကာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် နေပါပြီ။ ပါတီပေါင်းစုံလည်း ပါဝင်နေကြပါပြီ။ တစညသည်၎င်း ကြံ့ဖွံ့သည်၎င်း သူတို့၏လက်ရုံးပါတီများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနှစ်ပါတီသည် အစိုးရဖွဲ့ရန် ပြင်ဆင်ထားသော အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ကအစ ၀န်ကြီးငယ်များအထိ စစ်အစိုးရက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် အခြားတဖက်က ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ပါက အရပ်သားအစိုးရဖွဲ့ရန် ပြင်ဆင်ထားမူ မရှိသေး။ ၀န်ကြီးချုပ်ကအစ ၀န်ကြီးငယ်အထိ ခန့်အပ်ထားရန် စီစဉ်ပြင်ဆင်ထားမူ မရှိသေး။ ကြားနေရသည်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လည်း မရှိကြသေး ။ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်း မရှိကြသေး။ ပါတီဝင်အင်အားတွေပင် မရှိကြသေး။ ရွံပုံငွေလည်း မရှိကြသေး။ ဆိုတော့ သေလိုက်ပါတော့လား မောင်မင်းကြီးသားတို့ဟု ပြောရုံဘဲ ရှိတော့သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်တွေမြို့ မှ မိဇံရပ်ကွက်လို လုပ်နိုင်ခဲ့က တနိုင်ငံလုံး၏ အခြေအနေကို ကမ္ဘာက သိသွားနိုင်ပါသည်။ မည်သူမျှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မ၀င်ရောက်ခဲ့ပါက ကြံ့ဖွံ့နှင့် တစည တို့ အနိုင်ရသွားမည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။ အင်မတန်တော်သော နိုင်ငံရေးသုတေသီများ ဖြစ်ကြပါသည်။ နိုင်ငံရေးကို ခန့်မှန်းနိုင်သော ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြောင့် စစ်အစိုးရသည် ဤမျှလှည့်ဖျားနိုင်သည်ကို မတွေးတောကြပါ။ စင်စစ် မည်သူမျှ မ၀င်ပြိုင်ကြလျင်လည်း ကြံ့ဖွံ့နှင့် တစည တို့မှာ ပန်းပန်လျှက်ပါဆိုသလို ရှိနေပြီး ၀င်ပြိုင်လျင်လည်း ပန်းပန်ဆဲပါဟု ပြောနိုင်သော အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးပြီးသား ဖြစ်နေပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ပြိုင်ခြင်း မပြိုင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ပြသနာမဟုတ်။ ပေါ်လီစီပိုင်းဆိုင်ရာက ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ မူဝါဒရေးရာက ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရ၏ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံပြီးမှ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သော အရပ်သားအစိုးရကို ကြိုက်သည့်ပါတီများသည် စစ်အစိုးမှ ချမှတ်ထားသော ပေါ်လီစီအတိုင်း ဖြတ်သန်းသွားရမည်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒအတိုင်းလျှောက်လှမ်းချီတက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သည်တော့ စစ်အစိုးရ၏ပေါ်လီစီကို မကြိုက်ဟု ဆိုလျင် ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း မကြိုက်ကြောင်း သက်သေပြကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူလဘူတဖြစ်သော ယင်းအချက်ကိုကျော်လွန်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လွှတ်တော်ကျလျင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးရမည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ လုံးလုံးမျှ အဓိပ္ပါယ်မရှိ။ လွှတ်တော်သို့ မည်သို့ ရောက်သွားနိုင်မည် ဆိုသည်ကို မစဉ်းစားဘဲ တိုက်ပုံနှင့် မောင့်ကြက်သရေခေါင်းပေါင်းရှာနေသည်မှာ ရှက်စရာဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရသည် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးချင်သည်ဟု တစက်ကလေးမျှ ရှိခဲ့သည်ဆိုလျင် ပြည်သူပြည်သားတို့ကို ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံကို ပေးမည်မထင်။ ယခုလူတွေ ငတ်ပြတ်နေကြရသည်။ ဆင်းရဒုက္ခအမျိုးအမျိုးကို ခါးစည်းခံနေကြရသည်။ နိုင်ငံခြားများတွင် နည်းပေါင်းစုံနှင့် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားတို့မှာ ဦးဏှောက်ယိုစီးနေကြခြင်းဆိုလျင် ကြီးကျယ်သောစကားကို ပြောဆိုသည်ဟု ပြောကြမည်ထင်သည်။
ကျွန်တော့အထင်တော့ ဥဏှောက်ယိုစီးခြင်းလို့ မပြောချင်တော့၊ ဥဏှောက်ပျက်စီးနေကြသောသူများလို့သာ ပြောချင်ပါတော့သည်။ ကိုယ့်အရပ်ဒေသမှာ အေးအေးဆးဆေး စားနိုင်သောက်နိုင်ကြပါလျှင် သူတို့သည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အိန်နီးချင်းနိုင်ငံအများသို့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ထွက်ခွါသွားကြမည့်သူများမဟုတ်။ မိမိတို့ကျေးရွာတွေ ဖျက်ဆီးခံမနေကြလျှင် မည်သို့နည်းနှင့်မျ ပြည်ပသို့ ထွက်လာကြမည်မဟုတ်။ မိမိတို့ မိဘဆွေမျိုးတွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်မခံကြလျင် ဒုက္ခသည်စခမ်းများသို့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရောက်လာကြမည် မထင်။ ယင်းပြသနာများကို မည်သူက ဖန်တီးပေးကြပါသလဲ။ ရှင်းပါသည်။ စစ်အစိုးရသည် ယင်းပြသနာများကို အတိအကျ စီမံကိန်းကျကျ ဆောင်ရွက်ကာ လုပ်ပါသည်။ လုပ်နေခဲ့ပါသည်။ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လုပ်နေမြဲဖြစ်ပါသည်။ နောင်ကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်နေပါအုံးမည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ပြည်သူတို့သည် ကြီးငယ်မဟူ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးလာကြရပါပြီ။ သည်တော့ ဥဏှောက်ပျက်သူများပမာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘ၀ကိုရောက်မည်ဟု သိသော်လည်း အသက်တချောင်းကို ရှည်လိုစေခြင်းငှာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးထိမ်းရှောင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မ်ြန်မာနိုင်ငံသားတွေက သန်းနှင့်ချီ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခံစားနေကြချိန် စစ်အစိုးရအုပ်စုမှာ သန်းနှင့်ချီ၍ ချမ်းသာနေပါပြီ။ ယင်းမှာကံကြမ္မာကို အပြစ်ပုံချ၍ ရမည်မထင်။ သူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသည်မှာ ရက်ရက်စက်စက်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ှ့ကိုလည်း စစ်မျိုးဆက်ကို ဖန်တီးထားပါပြီ။ နူကလီးယားလက်နက်ကို ရရှိသွားပြီဆိုပါက သူတို့စစ်မျိုးဆက်သည် ကမ္ဘာကြေသရွေ့ မည်သည့်အခါမျ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမည် မဟုတ်။ ယခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်သည်မှာလည်း စစ်မျိုးဆက်ကို ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၄၀ အထိ သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ရရှိသောအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်း ၁၄၀၀ သည် စစ်အစိုးရက ရရှိမည့် ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါ်ပေါက်လာအုံးမည်ဆိုပါက သည့်ထက်ပို၍ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါအုံးမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စများကို မည်သူကမျ ခွဲဝေပေးချင်ပါမည်နည်း။ ပြီေးတာ့ သူတို့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ထိခိုက်ပျက်စီးသွားစေမည့် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လုပ်မည်မဟုတ်။
တခုသာရှိပါသည်။ စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် နည်းလမ်းမှာ ၂၀၁၀ ရွေကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရေးဖြစ်ပါသည်။ သပိတ်မှောက်ကြောင်းကို အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ အပြင် အာဆီယံ နိုင်ငံတို့ကို အသိပေးရပါတော့မည်။ ဤနိုင်ငံတို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်ဆန္ဒများကို မသိကြသေး ၊ နားမလည်ကြသေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ညံ့လွန်းအားကြီးနေပါသည်။ ယခုတောင်မှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြရန်အတွက် ပြောဆိုစည်းရုံးရန် နိုင်ငံတကာမှာ အဖွဲ့အစည်းကောင်းကောင်းတခုကို ဖွဲ့စည်း၍ မရသေးခြင်းမှာ သက်သေပြနေပါသည်။ သို့အတူ အမေရိကန်အစိုးရမှာလည်း ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားလှယ်မရှိသေး။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်က တောင်းဆိုသည့်တိုင် ဘာမျှ မပြုလုပ်ပေးသေး။ ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံတကာခုံရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး တောင်းဆိုနေသည်ကို သိပါလျက်နှင့် ယောက်ျားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များက ငြိမ်နေသည်မှာ ရှက်စရာဖြစ်နေပါသည်။
ကျွန်တော်လိုချင်သည်မှာ ယင်းအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်တရားခုံရုံးမှာ စစ်အစိုးရကို ခုံရုံးတင်ရေးတို့ တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်မပြုဆိုလျင် ယင်းနိုင်ငံကပင်လျင် အသိအမှတ်မပြုဆိုသောအချက်ကို ရရှိအောင် တောင်းဆိုကြရန်လိုမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဟု ဆိုလျင် စစ်အစိုးရ၏ အရပ်သားအစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုခြင်းကို ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဆိုလျင် ဤစကားကို အမေရိကန်အစိုးရမှ အတိအကျ ပြောပါသလား ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရန်လိုပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ရန် ကြိုးစားကြဖို့ဘဲ ရှိပါသည်။ သို့အတူ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးရန်လိုလာပါပြီ။ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် တွေ့ဆုံရန်လိုလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့က မေးစရာမေးခွန်းမှာ တချက်သာရှိပါတော့သည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စစ်အစိုးရ၏ အရပ်သားအစိုးရကို လက်မခံလျင် ကျွန်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းမည့် အရပ်သားအစိုးရကို လက်ခံပါမည်လား မေးခွန်းကို မေးရုံဘဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောနေသည်မှာ ပြည်ပတွင် ဖွဲ့စည်းမည့် အရပ်သားစင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကို ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ချေ။ ပြည်တွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမည့်အရပ်သားစင်ပြိုင်အစိုးရသို့မဟုတ် လူထုအစိုးရဖြစ်သည်။ ယင်းအထဲတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးချယ်ခံထားရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော လူထုအစိုးရဖြစ်သည်။ ယင်းအစိုးရကို အမေရိကန်အစိုးရမှ ထောက်ခံပါမည်လား၊ ကုလသမဂ္ဂမှ လက်ခံပါမည်လား ၊ ဥရောပသမ၈္ဂမှ လက်ခံပါမည်လား။ ယင်းမေးခွန်းကို ကျွန်တော်တို့ မေးချိန်ရှိနေပါသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမှာနေထိုင်သည့် နာယကဖြစ်သူဒေါ်သင်းသင်းအောင် မှာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနှင့် လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်ခန့်က နယူးယောက်မြို့  ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါပြီ။ သူမက စစ်အစိုးရအား နိုင်ငံတကာရားခုံရုံးတွင် ခုံရုံးစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါပြီ။ သူမလို အခြားသောယောက်ျားရင့်မကြီးများက ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှးချုပ်နှင့် ဆွေးနွေးရမည့်အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြောရမှာတောင် ခပ်ရှက်ရှက်ခံစားမိသည်။
မကြာခင် ဇူလိုင် ရက် နေ့ရောက်လာပါတော့မည်။ ထုံးစံအတိုင်းနယူးဒေလီမြို့ မှာ အခန်းအနားတွေကို ကျင်းပကြတော့မည်။ နယူးဒေလီမြိဲ့မှာရှိသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတို့သည် မည်သည့်နေရက်မဆို အခန်းအနားတွေပြုလုပ်ပြီး စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ကန်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ အမြဲဆန္ဒပြဖြစ်ပါသည်။ ဦးစီးဆောင်ရွက်သူများနှင့် တခဲနက်လိုက်ပါပြီး စစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြသည်မှာ စစ်အစိုးရအဖို့ ရာဇပလ္လင် ဖင်မမြဲစေသည်အထိဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ပြနေသည့်အချိန်တွင် အိန္ဒိယသမတထံသို့ကော ၀န်ကြီးချုပ်ကိုပါ ပြီးနောက် စစ်အစိုးရ၏ သံရုံးသို့ကိုပါ ကြေညာချက်များကို ပေးပို့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ပါလီမန်ထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပါလီမန် ဖိုရမ်ကော်မီတီတခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ အခန်းအနားတွေ ကျရောက်လာပြီဆိုလျှင် ကြေညာချက်ကလေးထုတ်ပြီး စာပေးနေသည့်ရောဂါမှ ကျော်လွန်ကာ ထိရောက်သောလုပ်ငန်းများကို ချမှတ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နေသည်ဆိုခြင်းမှာ ကြီးကျယ်ခြင်းမဟုတ်သည်ထက် အတိုက်အခံအချင်းချင်း ညီးညူနေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်ကား နယူးဒေလီကို အထူးလွမ်းဆွတ်သတိရကာ ဤလိုအခန်းအနားတွေပြုလုပ်ချိန် အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နှင့် ၈ျန်တားမန်တားရပ်ကွက်မှာ ပြောဆိုခဲ့တာတွေကို မျက်ရည်လည်ပြီး သတိရမိနေသည်။
အနောက်ဘက် နိုင်ငံရေးလောကသည် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံရေးလောကမဟုတ်ကြောင်းကို သိသာကြသည်။ ကျွန်တော့်မှာ အနောက်ဘက်က စိတ်တွေယခုအချိန်ထိရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ရန် လူတွေကို လိုက်ရှာနေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လိုက်ရှာနေရပါပြီ။ အဘယ့်အတွက်ဆိုလျှင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မပြုလုပ်နိုင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လျင် ကျွန်တော်တို့ အမြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ယင်းအစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရတို့နှင့် စကားပြောရပါတော့မည်။ ပြည်ပမှာနေထိုင်သောကျွန်တော်တို့မှာ ညံ့နေ၍မဖြစ်တော့။ အချိ်န်ကာလက နည်းပါးလာပါပြီ။ တချိန်တည်းမှာ ပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများကလည်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးကို အခြေခံကာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမပေးရေးကမ်ပိမ်းပြုလုပ်ကြရန်လိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးသည် စစ်အစိုးရကို အမှန်တကယ်ဖြုတ်ချနိုင်သော အင်အားစုများရှိသည့် မြို့ ပြဖြစ်သောကြောင့်ယင်းအချက်ကို နားလည်ရန်လိုလာပါသည်။ အခြားမြို့ အခြားပြည်နယ်ဆိုသည်မှာ ဗျူဟာတခုသာဖြစ်သည်။
တိတိကျကျ ပြောရလျှင် မဲမပေးရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုပါပြီ။ ပြည်သူတွေက နားထဲဝင်ရန် လိုပါပြီ။ ကမ္ဘာက ကြားရန် လိုပါပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမပေးရေး သပိတ်မှောက် လှုပ်ရှ...
ကျောင်းသား - ထောင် - တော်လှန&